Moto G4 Plus, nyocha na echiche mgbe otu ọnwa ojiji | Gam akporosis
Motorola na ezinụlọ ya Moto G akara a tupu na mgbe ke telephony ahịa site na àjà a n'ezie zuru ekwentị na ihe oké ọnụ price. Lenovo maara na mgbe ọtụtụ afọ nke ihe ịga nke ọma na ahịa, G nso chọrọ mgbanwe, ya mere ihe ịtụnanya ha nyere mgbe ha na-eweta Moto G4 na Moto G4 Plus.
Anyị na mbụ anyị bipụtara a nyocha zuru ezu nke Moto G4, ugbu a ọ bụ oge ime a nyocha vidiyo nke Moto G4 Plus, Ọkpụkpụ vitamin nke ọgbọ ọhụrụ a nke pụtara maka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya na igwefoto ya dị ike.
1 Moto G na-eme ka ịwụ elu 5.5 sentimita, ihe ịga nke ọma zuru ezu
2 Nzube nke na-ejigide usoro nke ụdị ndị gara aga
3 Nka na ụzụ e ji mara Moto G4 Plus
4 Ngosipụta dị ịrịba ama
6 Moto UI bụ interface kachasị mma ị nwere ike ịchọta
7 Igwefoto dị ike nke na-enye nsonaazụ dị ịtụnanya
7.1 Moto G4 Plus igwefoto onyonyo
Moto G na-eme ka ịwụ elu 5.5 sentimita, ihe ịga nke ọma zuru ezu
Ọhụrụ Moto G4 Plus na-ezube ịbụ nhọrọ mbụ mgbe ị na-achọ ezigbo ekwentị gam akporo maka uru maka ego. Ntinye ya na-egosi na Motorola / Lenovo na-enweta ya ọzọ na ekwentị ọhụrụ ya, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị enwe mmasị nha ihu igwe dị elu.
Ọ bụ eziokwu na ahịa na-arịwanye elu na-elekwasị anya na nnukwu ákwà, karịsịa n'ime ọhụrụ n'etiti-elu nso nke ọnụ ya na-emekarị nzọ na ihuenyo nke a size. Ntugharị a nke Lenovo na-akpata ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ama ama nwere ihuenyo dịkarịrị sentimita 5, ma bụrụ ndị buru ụzọ họrọ akara Moto G, chọọ azịza site n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Ajọ ihe m na-echeghị na ọ ga-emebi oke ahịa nke Moto G4 Plus. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-eji nnukwu ihuenyo, na ogo nke ihuenyo ya, igwefoto na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-eme ka mmụba a na nha.
Ihe m tụfuru bụ eziokwu ahụ bụ na, ọ bụ ezie na ụdị ihe atụ gara aga nwere asambodo IPX nke nyere Moto G iguzogide ájá na mmiri, ma Moto G4 na Moto G4 Plus naanị ha nwere nguzogide ịgba na ntufu. Onwe m, m na-atụle iguzogide ájá na mmiri dị oke mkpa na nke nwere ike ịzọpụta gị na ihe ijuanya na-adịghị mma, ọkachasị ugbu a n'oge ọkọchị na ekwentị niile ndị ahụ na osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri.
Nzube nke na-ejigide usoro nke ụdị ndị gara aga
Motorola ahọrọla a n'ihu imewe nke ahụ na-ejigide usoro ndị ahụ a hụrụ na ọgbọ Moto G gara aga, ọ bụ ezie na ọ gbanwere. Mgbanwe dị egwu na-abịa na nnukwu "M" dị na mpaghara igwefoto na-ekwe ka ngwaọrụ ahụ mata dị ka ekwentị Moto.
Dị ka ụdị ndị gara aga, Moto G4 Plus nwere a ahụ nke polycarbonate na-esote eku nke na-echekwa aluminom, ọ bụ ezie na ọ ka bụ plastik. Ihe dị mma banyere ihe a bụ na ọ na-akwado jog kwa ụbọchị na-enweghị oke nsogbu. M na-eji ekwentị maka otu ọnwa na-enweghị ụdị mkpuchi ọ bụla na, ọ bụ ezie ata ahụhụ ụfọdụ ọkọ n'ihi na ọdịda na mberede na-efega, ọnụ na-ejide elu n'ụzọ zuru oke.
Ekwentị tinyekwara na mbara ala dị egwu na ịdị elu nke mita 1.5. Ihe mbụ m chere bụ na ihuenyo ga-agbawa, mana iwepu akụkụ dị n'akụkụ nke tara ahụhụ ụfọdụ site na ịchacha plastik nke na-eme ka aluminom, na-ekwu na ma ọ bụghị na ekwentị ahụ enweghị mmebi ọ bụla.
Ya 155 grams nke ibu mee ka Moto G4 Plus bụ ekwentị mara mma. Rịba ama na, ọ bụ ezie na ọ nwere ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa, Lenovo emeela ka kachasị mma nke ekwentị na-eme ka ojiji ya dị mma. N'ezie, ị ga-achọ aka abụọ iji nweta isi ihe ndị dị na ihuenyo ahụ.
N’akụkụ aka nri anyị na-ahụ ekwentị on ma gbanyụọ bọtịnụ na mgbakwunye na igodo njikwa olu. A na-eji bọtịnụ ike mee aluminom ma nwee ike dị iche ka igodo akara olu, yabụ ị ga-agwa ha iche n’enweghị anya. Ihe otiti a na-enye karia nguzogide zuru oke, na-enye mmetuta nke inogide.
Ihuenyo ahụ nwere 71% nke akụkụ ihu, Ọ nwere ọkà okwu na igwefoto n'ihu n'elu na mgbakwunye na mkpịsị aka mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo. Onwe m ka amasị akara mkpisiaka ihe mmetụta n'azụ, dị ka anyị pụrụ ịhụ na ekwentị ndị ọzọ dị ka ZTE Axon Obere ma ọ bụ Huawei P9, ọ bụ ezie na na-amasị ndị na agba.
N'ikpeazụ na azụ anyị ga-ahụ igwefoto bụ isi nke ekwentị na mgbakwunye na akara Motorola. Rịba ama na azụ mkpuchi bụ nke mbughari, ebe anyị ga-ahụ oghere maka Micro kaadi SIM na oghere kaadi SD, ọ bụ ezie na batrị ofu. Ihe ojoo Moto Maker kaabatabeghị na Spen iji hazie mkpuchi azụ nke Moto G4 Plus.
Mgbe otu ọnwa nke ojiji m nwere ike ikwu na na Moto G4 Plus bụ ekwentị mara mma nke ahụ na-enye mmetụ dị ụtọ, na mgbakwunye na ịnwe oke nguzozi na-ekwe ka iji ike eme ihe na-enweghị ọtụtụ nsogbu.
Nka na ụzụ e ji mara Moto G4 Plus
Igwefoto na-aga n'ihu 16 megapixel sensor na autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps
Atụmatụ ndị ọzọ Mgbapu Mgbapu / Nchaji Ncha System / Mmetụta Mkpisiaka
Ahịa 269 euro na Amazon
Moto G4 Plus ghọrọ akụkụ nke ufọt ufọt nso - elu nke mpaghara na-enye ihe kariri ihe omuma di iche iche. Ekwentị bụ ezigbo ihe mgbaze kwa ụbọchị, ihe a ga-atụ anya ịhụ njirimara ọrụ ya.
Ma ọ bụ na Motorola ahọrọla nke ọma na akụkụ a, ịkụ nzọ na otu n'ime ihe ngwọta kacha mma nke Qualcomm, ndị dị ike Snapdragon 617, SoC nke karịrị ọrụ ya na nke ahụ, tinyere Adreno 405 GPU na 2 GB nke ebe nchekwa RAM, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla n'ụzọ dị ezigbo mkpa na ọrụ.
Dị ka a tụrụ anya ya, arụmọrụ ya na nke njedebe dị elu, dị ka Galaxy S7, mana lahịrị a nke na-ekewapụta ndị nrụpụta kacha elu nke ndị na-ahụ maka ndị na-agbakwunyere SoC na etiti etiti na-adịwanye njọ na Moto G4 ngwaike ike bụ ihe doro anya doro anya nke a.
Otu n'ime isi ihe juru m anya kachasị na-abịa na Moto G4 nwere Radio FM na ya ga-eji na-enweghị ekweisi dị ka poolu, dị ka ogologo dị ka anyị na-na elu mkpuchi ebe, ihe na m hụrụ n'anya. Aghọtaghị m na ọ bụ ekwentị bụ ka ahịa na-enweghị FM Radio ebe ọ bụ na o yiri ka m bụ otu n’ime ihe ndị kasị baa uru na ekwentị.
Enweghị m ike ichefu ya ihe mmetụta mkpisi aka. O juru m anya na nke a ebe ọ bụ na onye na-agụ ya na-arụ ọrụ zuru oke, yana oke oke mperi ma mata akara mkpisiaka n'akụkụ ọ bụla. Agam agwala gị na ọ nweghị ihe ọ bụla ga-enwere anyaụfụ ndị na-agụ akara mkpịsị aka nke njedebe dị elu.
N'ikpeazụ, m chọrọ ka a mata onye okwu n’ihu nke Moto G4 Plus; awade magburu onwe ụda mma na ọnọdụ ya na-egbochi anyị ịpịpụta ụda ọdịyo site na ndudue mgbe anyị na-egwu egwuregwu.
Ngosipụta dị ịrịba ama
Emeputa nzọ nnọọ ike na nkebi a site na àjà a 5.5 anụ ọhịa ahụ nwere àgwà dị elu karịa onye ọ bụla na-asọmpi na ọkwa ya. Motorola chọrọ ahụmịhe onye ọrụ iji zuo oke na nke a, ọ dịkwa oke ziri ezi site na ịkụ nzọ na a IPS panel ruru 1.920 x 1.080 pikselụ na pọdels 401 na anụ ọhịa.
Ihuenyo ihuenyo nke Moto G4 dị mma, na-enye ọmarịcha agba agba nke nwere oke okike na enweghị njupụta. Ndị ọcha zuru oke, nke mere ka Moto G4 bụrụ ọnụ ukwuu tụrụ aro maka ọgụgụ na-ekelekwa njupụta pixel ya dị elu. Ekwesiri ighota na site n'itinye ihe kachasi nma, inwere ike iguta ihe di nma na akwa n'enyeghi oria na ihuenyo. Moto G4 Plus ihuenyo na-enye ole na ole akụkụ nlele magburu onwe ya na ezigbo ọdịiche, gbakwunyere ogo nke ihie na ihuenyo Moto G4 na-enye anyị ohere ịhụ ọdịnaya ọ bụla n'èzí zuru oke, ọbụlagodi n'ehihie.
Otu n'ime ihuenyo kachasị mma dị na ọnụahịa ego a na nke na-eme Moto G4 Plus ekwentị dị oke mkpa ịtụle, ọkachasị maka ndị chọrọ Kporie egwuregwu vidio na ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ na ihuenyo dị mma na-enweghị imebi akụ.
Ọ bụrụ na Moto G4 Plus na-enweta ọkwa dị oke mma na ngalaba nke ihuenyo ahụ, ọ kwesịrị inye nnukwu ọmarịcha ikike ya. Ma nke ahụ bụ 3.000 mAh batrị Ọhụrụ ekwentị m juru m obi site na-enye n'ezie ezi arụmọrụ.
Inye ihe eji eme ihe na Moto G4 Plus Enweela m ụbọchị abụọ nke ojiji na-enweghị nsogbu, ihe ijuanya na-atụle 5.5-inch ihuenyo ya na Full HD mkpebi. Ana m ekwu maka iji ya eme ihe n'ịgbado ụgbụ, jiri netwọkụ mmekọrịta, na-ege egwu na elekere otu ụbọchị n'ụbọchị ... itinye ekwentị n'ụgbọelu n'abalị ma mechie ngwa ahụ, Moto G4 anagidela m ụbọchị ọzọ, na-abata n'abalị nke abụọ na 10 -15% yabụ, na-agụta na e nwere ụbọchị anyị ga-eji ekwentị karịa, anyị nwere ike inye ya nnwere onwe ruru nkeji iri anọ na abụọ.
Ihe ijuanya maka ekwentị nwere njirimara ndị a. Otutu kredit ahụ na-aga Snapdragon 617 SoC, ihe nhazi dị mma nke ọma, dịka m hụworo, na-enye ezigbo arụmọrụ na-enweghị iri oke.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Moto G4 Plus enweghị njikọ ọhụrụ Type-C USB, na-edobe micro USB na ala, ọ na-eme dakọtara na ngwa ngwa Nchaji usoro nke Qualcomm. Na mgbakwunye, igbe ahụ abatala chaja kwekọrọ na teknụzụ a, na-enye ya ohere inwe ikike kwụụrụ onwe ya n'etiti oge 15 na 5 na 7 nkeji, dabere na ojiji enyere. Nakwa ihe karịrị otu awa a ga-akwụ ụgwọ ya n'ụzọ zuru ezu.
Moto UI bụ interface kachasị mma ị nwere ike ịchọta
M kpọrọ asị interface. Aghọtaghị m ihe kpatara ndị nrụpụta ji kee ụdị ajọ ọkwa ahụ. Ọ bụ ezie na Motorola na ezigbo interface ya bụ ma e wezụga na-egosi iwu. Nke ahụ bụ na Motorola na-akụ nzọ na ntanetị dị ọcha, n'adịghị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-achọta Moto UI, dabere na gam akporo 6.0 M na nke ahụ na-ekwusi ike na ahụmịhe Android dị ọcha nke ọha na eze nwere mmasị dị ukwuu.
Ebee ka anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọzọ? n'ime ihere Display, Motorola magburu onwe ngosi usoro nke ga-egosi anyị oge na ificationsma Ọkwa na a nwa ndabere mgbe buru ihe ọnụ. N'akụkụ aka nke ọzọ Motorola ejirila usoro ngosipụta nke bara uru na nke kensinammuo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmacha Moto G4 ntakịrị, igwefoto ga-arụ ọrụ. Na nyocha vidiyo ị ga-ahụ otu ọ dị mfe iji uru nke nhọrọ ndị a na ekwentị.
Igwefoto dị ike nke na-enye nsonaazụ dị ịtụnanya
Maka m igwefoto na-esote ihuenyo ahụ ngalaba kachasị mkpa na ekwentị. Na Moto G4 Plus ọzọ na-anọchi na nke a ekele ya mmetụta Omnivision OV16860 16 megapixel 1 / 2,4 sentimita asatọ. Site na oghere nke elnte f / 2.0 na ọkụ ọkụ ụda abụọ, ha na-enye ọmarịcha arụmọrụ.
Chetara ha ihe laser iji nyere aka na-elekwasị anya na nke ahụ na-arụkwa ọrụ dị ka sistemụ nchọpụta dị iche. Na nke a, gbakwunyere Plus, na-enye elebara anya ọsọ ọsọ na ọnọdụ ọkụ kwesịrị ekwesị, yana ijide ngwa ngwa nke ogbugba ahụ. Mgbe ụfọdụ, elekwasị anya na-arapara na-amata ihe onyonyo ahụ, mana anyị kwesịrị ịka akara isi ọzọ site na imetụ aka iji dozie nsogbu ahụ.
La oyiyi mma dị ezigbo mma, pụta ìhè na oke nkọ nke weghaara oyiyi, àjà ala mkpọtụ na elu doo anya na ezi ìhè ọnọdụ, akada nnọọ eke agba.
Ọ bụrụ na ị hapụ Ọnọdụ HDR arụ ọrụ, ihe karịrị otu oge ga-azọpụta gị n'aka agbụ na ọnọdụ ndị ahụ dimmer. Igwefoto Moto G4 Plus enweghị ihe nkwụnye ihe onyonyo, yabụ na ọ bụ ihe dị mma maka ihe egwu na-egosi na ọkụ dị ala. Ihe ị ga-atụ anya na ekwentị dị n'etiti.
Ma ọ bụrụ na ị maara foto ị ga-anụ ụtọ ya mode ntuziaka nke ahụ ga - enyere gị aka ịgbanwe akụkụ dị iche iche dịka ikpughe, nchapụta, nguzo ọcha ... Ọ bụrụ na ịchọghị nsogbu, echegbula onwe gị, ngwa igwefoto kensinammuo ga - enyere gị aka ijide foto na oke mma. Ọbụna ijiji aka gị dị mfe ịnwere ike ime ka igwefoto rụọ ọrụ iji jide ngwa ngwa.
una Igwefoto zuru oke na nke ahụ ahapụla ezigbo ọnụ n'ọnụ m, karịa ma ọ bụrụ na anyị echebara ókè Moto G4 Plus nwere na ọnụego ya gbanwere. N'ikpeazụ, m ga-ahapụrụ gị gallery nke foto ejidere na Moto G4 Plus ka ị wee hụ otu igwefoto gị si arụ ọrụ
Moto G4 Plus igwefoto onyonyo
Motorola na Lenovo arụwo ọrụ magburu onwe ya na Moto G4 Plus. Enweghị m mmasị na ha ewepụla ájá na mmiri na-eguzogide mmiri, ọ bụ ezie na ihe ngosiwanye na njiri mkpịsị aka emeela onye kachasị ọhụrụ nke ezinụlọ Moto G dị ezigbo mma.
Ọ bụrụ na anyị echebara ogo nke ihuenyo ya echiche, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, igwefoto dị ike na eziokwu ahụ bụ na Moto G4 Plus na-abịaworị chaja dakọtara maka sistemụ ngwa ngwa ngwa ngwa ya mere ekwentị a ka ọ bụrụ otu n'ime ngwọta kacha mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị dị n'etiti - nke ziri ezi nke ọma na nke ahụ anaghị agafe euro 300.
Igwefoto Moto G4 Plus na-enye ọmarịcha njide
Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya ruru nke kachasị mma na ahịa
Enweghị mgbochi na mmiri dị ka ụdị ndị gara aga
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Moto G4 Plus, nyocha na echiche mgbe ọnwa ejirila
Newzọ ọhụrụ iji nweta ụgwọ ọkụ eletrọnịkị, Kaadị Onyinye na ndị ọzọ, budata ngwa a bit.ly/RecompensApp
Ebe ọ bụ na mbụ mto g, m na nke atọ, enweghị obi abụọ ọ ga-abụ m ọzọ
Ezigbo ekwentị, enwere m ya ma ọ dị mma, impeccable.
Egwuregwu, ihe ijuanya ọzọ sitere na Egwuregwu Ketchapp nwere egwuregwu egwuregwu mara mma
Egwuregwu egwuregwu ọhụrụ 12 maka gam akporo ị ga-anwale